Sunday September 15, 2019 - 20:20:46 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kumanaan kun oo qof ayaa codadkooda dhiibanaya si ay usoo doortaan madaxweynaha afarta sano ee soo socota wadankaas maamuli doono.
Hay'adda doorashooyinka xukuumadda Tuunis ayaa sheegtay in codbixintu ay si gaabis ah uga socoto dhammaan gobollada wadanka balse doorashadani tahay middii ugu liidatay ee Tuunis soo marta.
Tartanka madaxtinimada waxaa ka qeyb gelaya siyaasiyiin dhowr ah oo mid walba uu doonayo in uu noqdo madaxweynaha wadanka waxaana dadka ugu cad cad ka mid ah Munasif Almarzuuqi oo horay madaxweyne KMG ah wadankaas ugasoo noqday.
Shacabka dalka Tuunis ayaa intooda badan iska diiday in ay doorashada ka qeyb galaan arrinkaas oo ay ka caroodeen kuwa qaban qaabinaya doorashada, wax ka yar 27% ayaa ka qeyb gelaya doorashadan taas oo ka dhigan in tani ay tahay doorashadii ugu aqbalaadda yareed dhanka bulshada.
26 musharax ayaa xilka madaxweynaha Tuunis u ordaya waxaana ugu cad cad Munasif Al Marzuuqi iyo Yuusuf Al Shabaab oo ah R/wasaaraha xilka haya, waa doorashadii 2aad ee dalka Tuunis ka dhacda tan iyo markii uu dhacay Kacdoonkii lagu riday Bin Cali.